घरको पिँढीमा बसेर नातिनातिनी खेलाउँदै छोराबुहारीको कमाइ खाने बेलामा १०–१२ ओटा डोकाको भारी बोकेर बजारमा ग्राहक खोज्दै हिँड्न बाध्य हुनुहुन्छ उहाँ । “के गर्नु हजुर ! छोराबुहारीले हेरेनन्, सम्पत्ति छैन, बसेर खान पुग्दैन, त्यसैले यो उमेरमा पनि डोको बुनेर बेच्न हिँडेको छु,” विक भन्नुहुन्छ ।
विकले आफ्नो हातमा सीप र काम गर्नसक्ने अवस्था रहुन्जेलसम्म ढोको बुनेर नै जीविका चलाउने बताउनुभयो । “अहिलेसम्म यसैबाट जीविका चलाएको छु, अब कति नै बाँचुला र ? बाँचुन्जेलसम्म जीउ सञ्चै भयो भने डोको बुनेर नै गुजारा चलाउँछु,” विकले भन्नुभयो ।
बाध्यताले गर्दा जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि डोको बुनेर बेच्नुपर्ने उहाँको अवस्था रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा डोको बुन्ने जनशक्ति नहुँदा बुनेका डोका भने गाउँगाउँसम्म पु¥याउन सक्ने हो भने बिक्रीको कुनै समस्या नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । -रासस